XOG: Madaxweynihii hore ee Galmudug ‘Guuleed‘ oo War culus ka soo saaray Xaaladda Galmudug | HalQaran.com
Home Wararka Maanta XOG: Madaxweynihii hore ee Galmudug ‘Guuleed‘ oo War culus ka soo saaray...
Madaxweynihii hore ee Galmudug, Cabdikariin Guuleed
Guriceel (Halqaran.com) – Cabdi Kariin Xuseen Guuleed , madaxweynihii hore ee Maamulka Galmudug ayaa waxaa uu baaq ka soo saaray xaalada Galmudug oo haatan mareysa meel xasaasi ah.
Mr. Guuleed ayaa waxaa uu sheegay in dadka Reer Galmudug ay kasoo daaleen colaad iyo isfaham la’aan ka dhex-jirta , isla markaana xilligaan aysan u baahneyn colaad.
“Waxaan shaki ku jirin in colaad iyo is faham la,aan ay ka soo daaleen deegaanada Galmudug oo aysan u baahneyn colaad iyo dagaalo kale oo dhiig ku daato,waxaana dadka reer Galmudug ay ka reebeen asaagooda dowlad gobaleedyada kale‘‘, ayuu yiri madaxweynihii hore ee Galmudug Cabdi-kariin Guuleed.
Sidoo kale, waxaa uu sheegay inay nasiib darro tahay in iyada oo lagu guda jiro dhismaha Galmudug colaadeed ay halkaas ka soo if baxaan kana aloosmaan, isaga oo ka soo saaray baaq ka kooban Saddex qodob,kuwaas oo kale ah.
Ururka Ahlu sunna waxaan ugu baaqayaa inaysan dib u cunin halgankoodii iyo xushmadii ay bulshada Galmudug iyo tan Soomaaliyeedba u hayeen, ayna garwaaqsadaan in ay lagama maarmaan tahay inay ku milmaan nidaamka dowladnimo, oo aysan marnaba suurta gal aheyn is feer socodka nidaam dowladeed iyo urur hubeysan, waayo waa waxaan isla jaan qaadi karin.
madaxweynihii hore ee Galmudug